आफ्नै भवन बनाउँदैछन् ‘गाउँका सिंहदरबार’ - नेपालबहस
आफ्नै भवन बनाउँदैछन् ‘गाउँका सिंहदरबार’
| १५:१८:५० मा प्रकाशित
२९ माघ, दमौली । आफ्नै भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा असहज भएपछि तनहुँ जिल्लाका स्थानीय तहले भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएका छन् । भाडामा वार्षिकरूपमा लाखौँ रकम खर्च हुने र सेवा प्रवाहमा समेत असहज भएपछि जिल्लाका स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासनिक र वडा कार्यालय भवन निर्माणलाई तीव्रता दिएका हुन् ।
देवघाट गाउँपालिकाले वडा नं ५ क्युदीमा प्रशासनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि सापकोटाका अनुसार सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बजेट प्राप्त भएपछि गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणको काम शुरु गरेको छ । भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएकामा भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि सेवा प्रवाह सहज हुने उनले बताए ।
गाउँपालिकाले हाल दुई वटा घर भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको छ । बिजुली, पानीसहित गाउँपालिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि मासिक रु ८० हजार भुक्तानी गर्दै आएको छ । “गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा भाडामा कार्यालय सञ्चालन गर्दा समस्या भइरहेको छ, भवन निर्माण भएपछि सेवा प्रवाह गर्न पनि सहज हुन्छ,” उनले भने, “साथै खर्च पनि जोगिन्छ ।”
तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका भवनविहीन अवस्थामा छ । गाउँपालिकाका पाँच वटै वडा कार्यालयको आफ्नै भवन छैन । आफ्नै भवन नहुँदा गाउँपालिकालाई सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । घिरिङ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन पनि भाडाको घरमा सञ्चालनमा छ । भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रनबहादुर रानाले बताए ।
गाउँपालिकाले निर्माण शुरु गरेको वडा नं २, ३ र ५ को भवन निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । वडा नं १ को निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने वडा नं ४ को थालनी हुने क्रममा रहेको रानाले बताए । “गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक भवन र सबै वडाका भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको छ”, रानाले भने, “आफ्नै भवन बनेपछि सेवा प्रवाहमा सहज हुन्छ ।
सोही बमोजिम निर्माण शुरु भएको प्रमुख प्रशासकीय भवनको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनको काम फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न हुने पमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । रु तीन करोड ७७ लाखको लागतमा निर्माण शुरु भएको भवनमा रु एक लाख २५ हजार खर्च भइसकेको छ । “फागुन मसान्तभित्र निर्माण सकेर नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ”, पोखरेलले भने ।
गाउँपालिकाले हाल कच्ची भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । “साँघुरो भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दा असहज भइरहेको स्थितिमा नयाँ भवन बनेपछि सहज हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो । नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि हाल कार्यालय रहेको ठाउँमा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । “नपुग रकम आगामी वर्ष विनियोजन गर्छौं, कच्ची भवन भत्काएर बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवन निर्माण गर्ने गाउँपालिकाको सोच हो”, उनले भने ।
खोप लगाउन सहज पार्ने उद्देश्यले भवन निर्माण ४ दिन पहिले
एकै दिन नमोबुद्धका दुई वडा कार्यालय भवन शिलान्यास ४ हप्ता पहिले
पुरानै स्थानमा धुलिखेल कारागार निर्माण २ महिना पहिले
विकट कैलाशमा १० श्ययाको अस्पताल २ महिना पहिले
नागार्जुन नगरपालिमा किरियापुत्री भवन निर्माण ३ महिना पहिले
ओलीकाे कटाक्ष : म कुन पार्टीको सदस्य हो भन्ने लाग्छ भने अदालतलाई सोध्नु ! १४ घण्टा पहिले
गल्वुबेँशीकी महिला टपरी गाँसेर आम्दानी गर्दै २ दिन पहिले
कर्णाली करिडोरमा पुन यातायात सञ्चालन ५ दिन पहिले
नेपालले पाएको कोभिड भ्याक्सिन आज आउँदै २ दिन पहिले
दोभान आगलागीपीडितलाई अपुग सहयोग केन्द्र र प्रदेशसँग मागिने ६ दिन पहिले
विप्लवसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति गठन ७ दिन पहिले
क्यान्सर बिरामीलाई सहयोग गर्दै बाग्मती प्रदेश ४ हप्ता पहिले
अब मुठभेडको राजनीति सुरु ४ हप्ता पहिले
लक्ष्मी बैंकको नयाँ शाखा सर्लाहीको मलंगवामा ४ हप्ता पहिले
ओलीले पदमा टाँसिएर गफ दिनु लज्जास्पद : पौडेल ७ दिन पहिले
१.६० प्रतिशले घटेको शेयरबजारमा यी १० कम्पनीले गरे सर्वाधिक कारोबार ? ६ दिन पहिले
मानव बेचबिखन गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्न नगरस्तरीय कार्यविधि २ हप्ता पहिले
यता दाल भात तरकारीको प्रमोसन चलिरहदा यस्तो छ निरुताको फेसबुक स्टाटस २ वर्ष पहिले
शान्ति आदर्शमा सांस्कृतिक कार्यक्रमका साथ अभिभावक दिवस कार्यक्रम सम्पन्न १२ महिना पहिले
महालक्ष्मी विकास बैंकले दियो २७० बालबालिकालाई विद्यालय पोशाक ५ दिन पहिले
चीनमा गरिबी निवारणका लागि पाँच वर्षमा १५ खर्ब युआन परिचालन ६ महिना पहिले